Kooxda Barcelona oo Xili Ciyaareedkeeda 2011 iyo 2012 ku soo gaba gabeeysay Barbaro. - jornalizem
Kooxda Barcelona oo Xili Ciyaareedkeeda 2011 iyo 2012 ku soo gaba gabeeysay Barbaro.
Kooxda Barcelona ayaa caawa barbaro 2 iyo 2 la gashay Kooxda Real betis oo ay kula ciyaareeysay garoonkeeda kadib gool soo daahay oo ay caawa ku heshay barbaro. Ciyaariyahanka Sergio Busquests ayaa daqiiqadii 9 u dhiibay kooxdiisa hogaanka ciyaarta ayadoo sidaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta. Qeybtii labaad ee ciyarta ayaa waxaa calaamada Casaanka la siiyay oo garoonka laga saaray Ciyaariyahanka reer Brazil Dani Alves waxaana jaaniskaas ka faa’deestay Ciyaariyahanka Martin oo 3 daqiiqo gudaheeda 2 Gool ka dhaliyay waana daqiiqdihii 71 iyo 74 intaas kadib Ciyaariyahanka Reer Maali Seydou Keita oo Daqiiqadii 90 goolka Barbarada u dhaliyay Kooxdiisa.
Kooxda Barcelona ayaa Sanadkaan Xili Ciyaareedkeeda 2011 iyo 2012 ku soo gaba gabeeysay Barbaro ay caawa la gashay kooxda Real Betis waxeeyna isku diyaarineysaa CiyaartaFinalka Copa Del Rey oo la ciyaaraya 25 bishaan.
Dhanka kale Kooxda Kaalinta Seddexaad Xaqiiqsatay waa hore ee sida tooska u adeeysa Horyaalka Yurub ee CL waa Kooxda Valencia ayaa guul daro kala kulantay Kooxda Real Sociedad caawa waxaana looga badiyay 1 iyo 0 waxaana daqiiqadii 64 Gool ka dhaliyay Ciyaariyahanka Griezmann.